Onye nyocha mmiri na -a waterụ mmiri, onye na -enyocha mmiri dị elu - Sinsche
Onye anyị bụ na ihe anyị na -eme?
Ozi ndị ọzọGaa
Edeela ahịrị ngwa ọrụ Sinsche na kemịkalụ ihe karịrị afọ 14 iji mee ka nyocha mmiri dị mfe, ka mma - ngwa ngwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ozi.
T-CP40 Agba agba agba agba mmiri maka mmiri ọrinụ .ụ
TA-98 UV Spectrophotometer a na-ahụ anya
Onye nyocha mmiri mmiri K600
Q-CL501 Portim Colorimeter maka Chlorine efu, ...
TC-01 Mmiri Digital Titrator
High-Quality Cheap Do Meter N'ihi Aquaculture Fac ...
Chemistry, ndị na -emegharị ihe
Mụtakwuo maka oke njiri mara mmiri:
site na nchịkwaJun-17-2021
Nsogbu a na -ahụkarị maka ịchọpụta ogo mmiri ọdọ mmiri
N'oge ọkọchị, ebe igwu mmiri aghọọla ebe jụrụ oyi n'ime igwe mmadụ. Ọdịmma nyocha mmiri nke ọdọ mmiri abụghị naanị ihe na -echegbu ndị na -azụ ahịa, kamakwa ihe nyocha isi nke ngalaba nlekọta ahụike. Banyere nchọpụta na managem ...
Nchọpụta Chlorine fọdụrụ: Ọ na -esi isi mana ọ nweghị agba?
N'ime ọnọdụ nnwale anyị n'ezie, enwere ọtụtụ ihe ngosi a ga -atụle, chlorine fọdụrụ bụ otu n'ime ihe ngosi na -achọkarị ịchọpụta. N'oge na -adịbeghị anya, anyị nwetara nzaghachi n'aka ndị ọrụ: Mgbe anyị na -eji usoro DPD tụọ chlorine fọdụrụ, ọ na -esi ísì ọma nke ukwuu, mana ule ahụ ...
Azịza maka Nsogbu Mmiri Na -a Commonụkarị
Mmiri bụ ntọala ndụ, mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị mkpa karịa iri nri. Site na mmụba na -aga n'ihu na mmata ahụike ndị mmadụ, a na -elebara mmiri mgbata anya nke ukwuu site n'akụkụ niile nke ndụ. Taa, Sinsche nwere ọtụtụ nsogbu na -ekpo ọkụ, ka ị nwee ike nwee nghọta miri emi ...